औषधि सेवन गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिने ? – News Portal of Global Nepali
काठमाडौं–औषधि बिरामीको उपचारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि औषधिको सेवनमा कुनै प्रकारको गल्ती भयो भने यसको सिधा असर बिरामीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ ।
त्यसैले औषधि सेवनमा सजकता अपनाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि औषधि सेवनमा त्रुटि भइरहेको पाइन्छ ।
जसले गर्दा उपचारमा सफलता नहुने र बिरामीलाई झन्÷झन् जटिलतातर्फ लैजान सक्छ भने कहिले काही औषधिको साइडइफेक्ट पनि हुन सक्छ ।
त्यस पछि आउने सबै समस्या भने बिरामी आफैँले सहनु पर्ने हुन्छ । औषधि सही प्रयोग कसरी गरिन्छ ? सही रुपमा प्रयोग नगर्दा कस्ता समस्याहरु आउँछन् ? लगायत विषयमा डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
चिकित्सकले पनि बिरामीले खाने औषधिको रोल के हो भन्ने बारेमा जानकारी गराउँन आवश्यक छ । यसमा बिरामीले पनि चासो राख्नुपर्छ ।
चिकित्सकले तपाइँलाई लेखिदिएको औषधि र औषधि पसलले दिएको औषधि एउटै होकी होइन भन्ने बारेमा निश्चित गर्न अति आवश्यक हुन्छ ।
औषधिको एकातिरको भागमा औषधिको नाम र कम्पनी अनि डोज लेखेको हुन्छ भने अर्काे भागमा औषधि सेवनको मिति लेखिएको हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधिको डोज घटाउने बढाउने अथवा छोड्ने गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ तर चिकित्सकको सल्लाह बिना यस्तो गर्नु गलत हो ।
कुनै कारण बिनानै सेवन गरिरहेको औषधि बन्द गर्दा केही असर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ । जस्तै सुगर, प्रेसर लगायत रोगहरुको औषधि लामो समयसम्म खानु पर्नेहुन्छ । चिकित्सकको सल्लाह बिना यो औषधिको डोज घटाउने वा बढाउने गर्नु हुँदैन ।
एउटा औषधि पनि आधा मात्रै भाँचेर खाइरहनु भएको छ भने त्यस्तो औषधि एक दुई दिन पछि खाँदा खासै काम गर्दैन ।
झोल औषधिमा पनि सिल खोले पछि एक हप्ता ,१५ दिन या एक महिना मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसपछि भने निरन्तर प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
९३८०	पटक पढिएको